Ini Ndinobvisa Sei Kana kuti Ndiregedze Yangu Pinterest Akaunti? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 586
Vanhu vazhinji vanogona kupfuura nemutoo wekuda kudzima iyo Pinterest account kana kutomboimisa kuti uwane zvirinani kana zvasvika pakuwana zvirinani zvibodzwa. Zvichida vanhu vazhinji vanoshamisika kuti sei ingave iri pfungwa yakanaka kusimudzira kumiswa kweakaundi.
Kugona kudzima kana kudzima account chinhu chakanakisa chinopa vanhu mweya wehukama hwevanhu kana kutsakatika nekuda kwekukanganisa. Iyi hapana mubvunzo zano risingachinjiki rekubva panharaunda yedhijitari uye nekuvandudza mazano ari nani anotipa mibairo inoshamisa.
Izvo hazvigoneke kuda kugadzirisa ese mamiriro ari pane internet uye unzwe kuneta neyakaipa mamiriro ayo anogona kukonzerwa nevanhu. Nekudaro, zvinonyanya kuitika kuti mu Pinterest inoita zvese zvakapesana, asi panguva imwechete zvinotora nguva yako kuti utarise pini dzinonakidza nezvakatumirwa.
Zvikonzero zvekudzima Pinterest
Vamwe vanhu vanoti kuda kwavo pasocial network kunopfuura zvinhu zvese zvinogoneka. Nekudaro, dzimwe nguva zano rakanaka ndere kukwanisa kumira kubva zuva nezuva uye ramba uchiregererwa pane zvinoitika munyika yedhijitari.
Nguva zhinji tinokanganwa kuti zera redhijitari nderekuti, kunyangwe richisanganisira 90% yezviitiko nhasi, zvakanaka zvakare kutarisa zviripo mune chaiko nyika. Enda unotaura neshamwari, ita mabasa anogona kuumba kukanganisa kwevashandisi, kukurudzira mapurojekiti ekugadzira, nezvimwe
Naizvozvo, pazasi iwe uchaona izvo zvikonzero nei iyo Pinterest account yakadzimwa kana kubviswa Parizvino.
Dzimwe nguva isu tinotora Pinterest kana chero imwe peji seyemuse yemazano, uye muchokwadi mazuva edu nehupenyu mukati mepuratifomu ari kupfuura. Zano rakakura kutora mweya uye kugadzirisa zvese zvisina kufamba zvakanaka panguva yakatarwa.
Akarongwa zvisirizvo mazano
Vanhu vanowanzo davira kuti nekuti zano harina kuenda sezvarakarongwa, zvakanaka kuti urambe uchiedza. Pamwe dzimwe nguva iri zano rakanakisa, asi zvakare rakanaka zorora uye funga nemusoro unotonhorera chii chinoitika, kune izvi iwe unogona kwenguva pfupi kumisa maakaunzi.
Tichipa zvikonzero zvataurwa pamusoro, zano rakanaka nderekutevera matanho achasimudzwa kuti uwane zvibodzwa zvirinani.
Iwe unofanirwa kudzvanya matatu-poindi icon
Izvo zvinodikanwa kusarudza sarudzo ye: "marongero"
Nguva yekupinda account marongero
Sarudza iyo tebhu: "account deactivation"
Panguva yekuita nhanho idzi, chikuva chinokumbira tsananguro nezvekuti nei iwe uchizorora. Unogona kuisa chii iwe unoda kugovera pane peji.
Kune rimwe divi, kudzima account yakati zvinokwanisika kuti iwe uzviite mukati mematanho akafanana ataurwa pamusoro. Asi danho iri rakakosha kuita uye nekudaro rinofanirwa kuitwa zvine mutsigo.
1 Zvikonzero zvekudzima Pinterest
1.1 Kushaya nguva
1.2 Akarongwa zvisirizvo mazano
2 Ini ndinodzima sei kana kuita yangu account yePinterest?